Shaxan Ku Shaqeynta Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda Miiska Shaqeynta ee Shiinaha
Jadwalka Qalitaanka Qalabka Qalitaanka ee TY ahama ee Qolka Howlgalka
Miiska hawlgalka ee TY wuxuu ku habboon yahay qalliinka wadnaha iyo caloosha, ENT, dhalmada iyo cudurada haweenka, kaadi mareenka iyo lafaha, iwm.
Jaangooyada, tiirka iyo salku waa bir bir ah, oo si fudud loo nadiifiyo oo u adkeysata daxalka
Shaxda T-1 ahama ee Farsamada ahaanta ee Qalliinka Guud
Miiska farsamada TS-1 wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah, oo leh awood farsamo sare, iska caabbinta daxalka iyo nadiifin sahlan.
Jadwalka Qalliinka Qalliinka Qalliinka ee loo yaqaan 'TS Manual TS' ee Isbitaalka
Miiska qalliinka ee 'hydraulic TS' wuxuu ku habboon yahay qalliinka wadnaha iyo caloosha, ENT, dhalmada iyo haweenka, kaadi mareenka iyo lafaha, iwm.
Jadwalka Hawlgalinta Bixinta Caafimaadka FD-G-2 Shiinaha ee Waaxda Haweenka iyo Haweenka
Miiska umusha ee loo yaqaan FD-G-2 oo aad u fara badan ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhalmada dhalmada, baaritaanka haweenka iyo qalliinka.
Jirka, tiirka iyo saldhiga miiska gudbinta korontada waxaa laga sameeyaa 304 bir bir ah, oo u nugul u adkeysiga iyo fudeydka nadiifinta.
Jadwalka Baaritaanka Caafimaadka Caafimaadka Haweenka ee FD-G-1 ee Isbitaalka
Jadwalka baaritaanka cudurada haweenka ee FD-G-1 wuxuu adeegsadaa qalab aad u sarreeya waana u adkaysiga daxalka, taas oo ku habboon nadaafadda maalin kasta iyo jeermiska isbitaalka.
Shaxda TDY-2 ahama ee moobilka korontada ku shaqeysa ee qalliinka guud
Miiska hawlgalka ee TDY-2 wuxuu leeyahay sariir bir ah iyo tiir bir ah oo dhan 304, si fudud loo nadiifiyo oo looga hortago wasakhda.
Dusha sare ee miiska wuxuu u qaybsan yahay 5 qaybood: qaybta madaxa, qaybta dambe, qaybta badhida, iyo laba qaybood oo lugta laga goosan karo.
Shaxda TDG-1 Godd Tayada Waxqabadka badan ee korantada ee leh shahaadooyinka CE
TDG-1 Miiska hawlgalka korontadu wuxuu leeyahay shan koox oo ficil oo muhiim ah: korantada oogada sare ee sariirta la hagaajin karo, horay iyo gadaal u janjeero, leexashada bidix iyo midig, saxanka gadaal u sarreysa, iyo bareeg.
TDY-Y-2 Isbitaalka Qalabka Qalliinka Qalabka Elektro-Haydarooliga
Miiskan hawlgalka korantada iyo korontada ku shaqeeya wuxuu u qaybsan yahay 5 qaybood: qaybta madaxa, qaybta dambe, qaybta badhida, laba qaybood oo lugo kala sooc ah.
Qalabka fiber-ka gudbinta iftiinka sare oo lagu daray 340mm sibidhka jiifa ayaa hubinaya in uusan lahayn meel indho la 'inta lagu jiro baaritaanka raajada.
TDY-Y-1 Miis-Ujeeddo Multi-Ujeedada Korantada-Haydarooliga Caafimaadka ee Shiinaha
Miiska hawlgalka Haydarooliga ee TDY-Y-1electric wuxuu kobciyaa qaab-dhismeedka gudbinta hidda-koronto-soo-saarka korontada laga soo dejiyo, kaasoo beddelaya tiknoolajiyada gudbinta usha lagu riixo korontada.
Isku hagaajinta booska ayaa ka saxsan, xawaaraha dhaqdhaqaaqa waa mid isku mid ah oo xasilloon, waxqabadkana waa mid lagu kalsoonaan karo oo waara.
TDY-G-1 Raadiyaha Nooca birta ah ee birta korontada-Haydarooliga AMA Miis loogu talagalay Neurosurgery
Miiska hawlgalka elektroonikada-TDY-G-1 elektro-haydarooliga, oo leh heer aad u hooseeya, gaar ahaan ku habboon qalliinka maskaxda. Waxay sidoo kale ku habboon tahay qalliinka caloosha, dhalmada, cudurada haweenka, ENT, kaadi mareenka, anorectal iyo noocyo kale oo badan oo qalliin ah.